सातामा ४८.२४ अंकले बढ्‍यो नेप्से | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण सातामा ४८.२४ अंकले बढ्‍यो नेप्से
on: April 19, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
वैशाख ६, काठमाडौं (अस) । नेप्से परिसूचक गत साताको तुलनामा ४८ दशमलव २४ अंकले बढ्न पुगेको छ । गत साताको अन्तिम दिन चैत २८ गते १ हजार १८४ दशमलव शून्य २ विन्दुमा बन्द भएको परिसूचक वैशाख ५ गते १ हजार २३२ दशमलव २६ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । सातामा चार दिनको कारोबारको तुलनामा नेप्से परिसूचक ४३ दशमलव ५५ अंकले बढेको छ ।
सोमवार वैशाख २ गते १ हजार १८८ दशमलव ७१ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक बिहीवार १ हजार २३२ दशमलव २६ विन्दुमा बन्द भएको हो । गत साताको तुलनामा बजार पूँजीकरण रू. ६५ करोड बढ्न पुगेको छ । गत साताको बिहीवार चैत २८ गते रू. १४ खर्ब ६२ अर्ब रहेको बजार पूँजीकरण वैशाख ५ गते बिहीवार रू. १५ खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ । सातामा भएको कारोबारमा चारदिनको परिसूचक बढ्दा ४८ दशमलव २४ अंकले बढ्न पुगेको हो । यस सातामा बैकिङ, बीमा, लघुवित्त समूहका कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेपछि नेप्से बढ्न थप सहयोग पुगेको हो ।
यस साताको चार कारोबार दिनमा ३ करोड ३८ लाख ५६ हजार ७२६ कित्ता शेयरको रू. २ अर्ब ६२ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । गत सातामा २ करोड ३३ लाख ६५ हजार ३५२ कित्ता शेयरको रू. २ अर्ब ९९ करोडको शेयर कारोबार भएको थियो । गत साताको तुलनामा कारोबार रकम रू. ३७ करोड २७ लाख घटी हो । गत सातामा पाँच दिन शेयर कारोबार भएको थियो भने यस सातामा चार दिन कारोबार भएको थियो जसले कारोबार रकम घट्न पुगेको हो ।
सातामा सर्वाधिक शेयर कारोबार हुनेमा नौ वाणिज्य बैंक परेको छ भने एक नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी परेको छ । वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा मुलक विवरण आउने खबरले पनि लगानीकर्ताहरुको रोजाइमा परेको हो । कुमारी बैंकको चैत ६ गते बुक क्लोज भएकाले लाभांशको लागि सर्वाधिक कारोबार हुन पुगेको हो ।
सातामा दुई कम्पनीको १ करोड ८९ लाख कित्ता शेयर सूचिकृत
सिनर्जी फाइनान्स कम्पनीको ३ लाख ८० हजार ९३८ कित्ता हकप्रद शेयर र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको १ करोड ९४ लाख ४३ हजार ८२ कित्ता बोनस शेयर सूचिकृत भएको हो ।
आगामी साता आईपीओको साता
आगामी सातामा चार कम्पनीको १ करोड ६२ लाख ४३ हजार ९२८ कित्ता आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ । जसमा नबिल व्यालेन्स फण्ड २, साञ्जेन र रसुवागढीको आवेदन वैशाख ५ र ६ गतेदेखि खुला भइसकेको छ ।